वैदेशिक रोजगार आशा र बाध्यता | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अब पैसा कमाउनैं भनी विदेशिनु नपर्ने
मलेसियामा मृत्युदण्ड सुनाइएका घलेको सुनुवाई →
वैदेशिक रोजगार आशा र बाध्यता
Posted on 26/01/2011 by नारायण नेपाल | १ टिप्पणी
रुक्मणी सिग्देल तिमल्सिना,
नेपाल गरिबीको रेखामुनि रहेको एउटा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्र हो । गरिबीको कारण यहाँबाट वर्षेनि हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताका कारण भएका स्रोतसाधनहरूको समुचित प्रयोग राष्ट्रले गर्न सकिरहेको छैन । सिंगो विश्व उत्पादन तथा व्यापार प्रतिस्पर्धामा जुटेको वेला नेपालका नागरिक भने अन्य देशमा अति निम्न स्तरको मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।उद्योग व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइनु, लोडसेडिङको समस्या हुनु, औद्योगिक नीतिहरू स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुन नसक्नु, भएका स्रोतहरूलाई समय र स्थानअनुरुप परिचालन गर्न नसक्नुु, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउनमा सरकारी क्षेत्रबाट हौसला नपाइनुजस्ता कारणले देशका स्रोत र जनशक्तिहरू खेर गइरहेको छ । आज लाखौँ नेपाली युवाको श्रम र पसिना विदेसिइरहेको छ । तर, श्रमकै कमी र कामकै खाँचो भएर नेपालीहरू विदेशिएका होइनन् । स्वदेशमा बसेर गरेको श्रमले जीविकोपार्जनमा पनि धौधौ पर्ने भएको र त्यसबाट जीवनमा कुनै उन्नति र प्रगतिको सम्भावना नदेखेर युवाहरू विदेस पलायन भएका हुन् ।
नेपालबाट प्रायः खाडी मुलुकतिर श्रमकै लागि लगिन्छन् । यदाकदा युरोपियन राष्ट्रमा ‘स्टडी भिसा’मा नाममा काम गर्न गए पनि त्यसको संख्या नगण्य छ ।
विदेशिने क्रममा नेपालीहरू वैध/अवैध रूपमा दलालमार्फत ठूलो रकम खर्च गर्छन् । तर जाने व्यक्तिको मन्जुरीमा लाखौँलाख असुलेर दलाल तथा म्यानपावर कम्पनीहरू अत्याधिक फस्टाएका छन् । थोरै म्यानपावर कम्पनीले मात्र सेवासुविधामा ध्यान दिने गरेका छन् । यसै सिलसिलामा सन् २०१० का लागि एसओएस म्यानपावर सरकारबाट सर्वोत्कृष्ट घोषित गरियो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था विभागको नयाँ तथ्यांकअनुसार दैनिक एक हजारका दरले र हालसम्म करिब १७ लाख नेपाली विदेशिएको पाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि विदेसिएकाबाट केही मात्रामा राष्ट्रको आयमा समेत टेवा पुगेको छ । म्यानपावर कम्पनीका नाममा नेपालमै केहीले रोजगारी पनि पाएका छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले पनि आफ्नो बर्चस्व बढाइरहेका छन् । विदेशी सीप, ज्ञान तथा प्रविधिलाई यथाशक्य नेपालमा पनि भित्र्याउन सफल भएको छ । साथै विदेशमा गरेको दुःख सम्झेर आफ्नै माटोलाई माया गर्ने वातावरण पनि बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फाइदा/बेफाइदा दुवै हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारले देशलाई अपूरणीय क्षति पनि हुने गरेको छ । विदेश गई अलपत्र परेर कतिले भएको सम्पत्ति पनि सकेका छन् र घरबार बिचल्ली पारेका छन् । कति अपांग भएका छन्, कति उतै मरेका पनि छन्, कतिले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । कैयौं नेपाली चेलीका अमानवीय व्यवहारका कारण मानसिक सन्तुलनसमेत बिग्रेका घटना पनि पढे/सुनेका छौँ । देशको आन्तरिक उत्पादन र कूल आयलाई पनि वैदेशिक रोजगारले घटाइरहेको छ । वास्तवमा श्रमशक्ति पलायन हुनु भनेको राष्ट्रले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु हो । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारको केही सकारात्मक पाटो भए पनि नकारात्मक पक्ष ठूलो छ ।
यसले सांस्कृतिक मेला, पर्व र चाडपर्वलाई समेत असर पारेको छ । सचेत युवाहरूको अभावमा राजनीतिक मनपरी र अत्याचार पनि बढिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने-आउने क्रममा नेपालीले एउटा दरिलो पाठ पनि सिक्न सक्नुपर्छ । विदेशमा बेचिने श्रम नेपालमै खर्च गर्दा के होला ? खाडी मुलुक तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूकै जस्तो श्रम र स्रोतको समुचित प्रयोग नेपालमा पनि गर्न सके नेपाल कस्तो होला ? नेपालमै बसेर विदेशको जस्तो मेहनेत गर्न संवेदनशील हुने हो भने नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति हुन्छ कि हुँदैन होला ? यसबाट औद्योगिक तथा व्यवसायिक रूपमा नेपाललाई अगाडि कसरी लान सकिएला कि नसकिएला ? जस्ता प्रश्नहरूको समुचित उत्तर खोज्ने हो भने नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन लामो समय लाग्नेछैन । तसर्थ, श्रम र युवाशक्तिको पलायन हुनबाट रोक्न राज्यद्वारा नयाँ नीति र प्रभावकारी व्यवस्थापन अपनाउनु अत्यावश्यक छ ।
Posted by: Narayan Nepal Source: Nayapatrika
One response to “वैदेशिक रोजगार आशा र बाध्यता”
हर्क | 26/01/2011 मा 7:38 अपराह्न |
neplako bkas ajhai 200 years samma pani hune chhat dekhiyeko chhaina roj garko ta kura nai nagarau…………………………………
कुबेतमा धर्मराजको धर्म